Mabhanga makuru mashanu ehurumende muChina
Dai 6, 2022 Demi Banks, China
Sezvo hupfumi hweChina hunowedzera nekukasira - ndizvo zvakaitawo bhangi rayo rekubhanga. Mabhangi eChinese ari kukura zvakanyanya mudzimba nekune dzimwe nyika- hazvishamisi kuti ndiwo chikamu chikuru chemabhangi epasi rose. Sezvo isu tese tichiziva, China ine
Nzira yekuwana sei basa muShanghai? Gwaro rinokurumidza kumunhu wese, vatorwa uye vagari veChinese
February 17, 2022 Demi mabasa, Shanghai
Wese munhu anoda kuwana basa muShanghai anoda kutanga awana basa muShanghai. Kutanga kwakanaka kunogona kuve webhusaiti yebasa senge www.51job.com muShanghai kana Boss Zhipin muShanghai. Unogona kutsvaga masangano ekupinza basa
Nzvimbo dzekugara muChina
Indasitiri yekuChina yemahotera iri kukurumidza kuita nani, nemaguta mazhinji achipa dzakasiyana siyana sarudzo kubva pakuchipa kusvika kune yepamusoro-soro. Hunhu hwemahotera eumbozha, kunyanya mabhureki epasi rese, uye mahositera ekumashure anofananidzwa neaya ekuMadokero, aine
Rwendo rwekuChina runoita marii?
January 17, 2022 Shubham Sharma China, mari, famba
China ndiyo nyika ine vanhu vakawanda munyika uye iri kuEast Asia. China ine dzimwe dzenzvimbo dzinopisa moyo kwazvo munyika idzo munhu wese anofanira kuona kamwe chete muhupenyu hwavo. Kuuya kune chikafu iwe chauchawana
Dzimba dzakaita sei muChina? Kutenga uye kurenda muChina
January 16, 2022 Demi China, dzimba
Kuti uwane pekugara pakakodzera muChina, zvinoda kumhanya, kutsungirira uye, kazhinji, shamwari yakanaka kana realtor uyo anotaura mutauro weko. Tichakufamba nemhando dzakasiyana dzekugara dzinowanikwa, zvingangodaro
Maitiro ekunyorera asylum muChina?
January 10, 2022 Demi China, vapoteri
Hofisi yeUNHCR iri muBeijing. Yakasimbiswa muma1980. Pakave nevapoteri muChina kubva ipapo. Vanotsvaga hupoteri muChina vanozivikanwa uye vanochengetedzwa nehurumende yeChinese. Nyorera Kunyorerwa: China. Zvinoenderana neUNHCR,
Nzira yekuwana sei basa muChina?
January 10, 2022 Shubham Sharma China, mabasa
China, inova nyika ine vanhu vazhinji kwazvo pasi ino zvakare inozivikanwa kuve imwe yehupfumi hwenyika. Kuuya kuhupfumi hweChina, inokotama gore rega rega. Izvo zvakare zvinogadzira kugadzira akawanda mabasa anopa
Chikoro system muChina
January 4, 2022 Demi China, chikoro
China, inozivikanwa seRepublic of China, inyika iri kuEast Asia. China ine vanhu vakawanda pasi rose uye nyika yechina pakukura. Hurongwa hwezvikoro hwenyika ino zvakare imwe yenyika dzepamusoro. The
Ungawana sei mabasa muBeijing?
Dai 28, 2021 Demi China, mabasa
Beijing ndiro guta guru reChina uye, zvisingashamisi, guta rine huwandu hwakawanda hwehunyanzvi hwetarisiro kune vese zvizvarwa uye vekare-patsika. Tora nguva yekudzidza nezve musika webasa wemuguta uye zvingangoitika zvebasa usati waenda kuBeijing uye kutanga an